Umthandazo kuSan Marcos de León. ? ku-Tame, Umsebenzi kunye noThando.
Umthandazo kuSan Marcos de León. Yonke imithandazo inamandla, kodwa Umthandazo wokukhetha uphawu lwe-leon ukwenza ithambo, uthando, umsebenzi kunye nokukhankanywa kukhethekileyo kuba uSanta Marko wayekufutshane noYesu xa wayelapha emhlabeni.
IVangeli kaMarko oNgcwele yeyona nto ibalulekileyo kuba inenguqulelo ye engqondweni yomntwana, njengoko wayenjalo uMarcos ngelo xesha, nto leyo eyenza ukuba ibe yinguqulelo emsulwa ezele ziinyaniso ezikwaziyo ukuchaphazela wonke umntu ohamba ngeengoma zayo.
IVangeli yeSan Marcos ibaluleke kakhulu kuba inenguqulelo yomqondo womntwana, njengoko wayenjalo uMarcos ngelo xesha, eyenza inguqulelo engenatyala kwaye igcwele iinyaniso ezichaphazela wonke umntu ohamba phakathi kwabo iileta.
Namhlanje, iSan Marcos ibe likhonkco elifanelekileyo lokubuza kuThixo zonke izicelo ezinamandla, nokuba kunzima kangakanani na.
UMark oNgcwele, umhlobo kaYesu, uba ngabahlobo babo bonke abagcina imfuno entliziyweni yabo nabadinga into eyenzelweyo ezulwini.
1 Ngaba imithandazo eya kwi-Holy Mark kaLeon iyasebenza?
1.1 Umthandazo oya kuMark oNgcwele kaLeon wokuthoba umntu
1.2 Umthandazo weSan Marcos de León wothando olungenakwenzeka
1.3 Umthandazo kaMark oNgcwele kaLeon ngomsebenzi
1.4 Umthandazo uze | uthando
Ngaba imithandazo eya kwi-Holy Mark kaLeon iyasebenza?
USan Marcos de León wayehlala esondele kuYesu Krestu, kungoko emcela ukuba aphumelele, kuba usithandazela phambi komhlobo wakhe.
Imithandazo kufuneka zenziwe ukusuka ezinzulwini zomphefumlo y ngokunyaniseka okunokwenzeka, khumbula ukuba sicela umangaliso okanye imeko ukuba isonjululwe, yiyo loo nto kufuneka ucele ngokucacileyo ukuba yintoni efunekayo.
Ngomthandazo kwiNgcwele kaMark kaLeon iyafana. Kufuneka ukholo.
USaint Maros uyayazi into yokuba kuyintoni ukubona umhlobo wakhe esifa, uyazi ukuba kuthini na ukushumayela ilizwi likaThixo xa umntu etshutshiswa, wabandezeleka. Yintlungu kunye nosizi, uloyiko lokungaziwa kunye nazo zonke iimbandezelo ezinokubandezeleka.
Yiyo loo nto Xa usenza isicelo akuthathi xesha lide ukuphendula, kuba uyayazi into enokubakho apha emhlabeni kwaye ngoku ngumlingani wethu ezulwini.
Amandla akhe angenamda, Nemisebenzi yakhe engenakubalwa. Kukho amawaka abantu abanokunika ubungqina bamandla abo, yiyo loo nto ke imithandazo ISan Marcos de León iyasebenza.
Umthandazo oya kuMark oNgcwele kaLeon wokuthoba umntu
San Marcos de León wena owaphatha ilizwi likaKrestu el mundo uwuve umthandazo wam.
Ngamana amandla akho nokuzimisela kwakho kungafezekisa ubulungisa kwaye kwanga iintshaba zam zingawela boyisiwe phambi kweSan Marcos elungileyo, nge amandla weNgonyama kunye namandla akhe okulawula benza abantu abafuna ukundenza kakubi baguqe phambi koThixo batshintshe iingqondo zabo.
Ndithintele wena oye wancama ubomi bakho ukuze wenze ilizwi lePhezukonke iNkosi laziwe kwaye uthobele isicelo sam ...
Andifuni ububi kuye, kuphela ukuba batshintshe abo bandenzile kwaye bandenzakalise, ukuze babuyele kum ngendlela enobubele.
Ngamana uthando aloyisa ububi kwaye ubomi bam bube yindawo yoxolo. Yonke le nto ndiyicela ngegama likaYesu Krestu iNkosi yethu kwaye ndicela undimamele.
Imithandazo inokwenziwa nangasiphi na isizathu kwaye akukho namnye unokuzingca kwaye engaphezulu okanye engabalulekanga komnye.
Bonke abantu badlula kwiimfuno kwaye kufuneka singenelele ngaphambi kwezulu ukuze sifumane into esiyifunayo.
El cela ukutshintsha Umntu, amaxesha amaninzi, yinto yobomi okanye yokufa.
Ingasetyenziswa ngeendlela ezininzi, ezinje emsebenzini, ikhaya, kunye nesihlobo o ngumhlobo y Molweni.
Ngalo mthandazo musa ukufuna ukunyanzela okanye ukuhambisa intando yabanye abantu kodwa ukwazi ukukholisa kancinci ukuze ufikelele kwinjongo ezokwanela onke amaqela abandakanyekayo.
Umthandazo weSan Marcos de León wothando olungenakwenzeka
Usikelele uMarko oMkhuluwa kaLeon, wena owenza konke kungenakwenzeka, othambisa inamba nengonyama. Yenza (igama lomntu) uqaphele iimvakalelo zam, uthando lwam, idini lam.
Ndiyanibongoza ukuba intliziyo yenu engenambulelo yonakaliswe luthando lothando. Xa uvuka kubuvuvu bakho, ndifuna ukuba ucinga ngam.
Owu, San Marcos de León, wena owatyhileyo wakwazi ukukhupha irhamncwa elinamandla, ke ndiyakucela ke, ukuba lo mthetheleli wam undimamele, uyeza, makungabikho namnye umnqandayo, myeke owam Iindlela zothando ziyahlangana nezakho, ukuba undithanda ngamandla am ndikuthandayo.
Ukwenzela i ngcamango Abaku (igama lomntu) ndiza kuwe, San Marcos, ukuze emaphupheni abo kunye namaphupha abo emini besegameni likaThixo nangenxa yam, ukuze uthando lwabo lujoliswe entliziyweni yam, ukuze ndibe kwiingcinga zabo. .
Ndincede ndiphilise le ntliziyo ehlutshwa kukungakhathali kwaye wenze konke okwam ukubandezeleka guquka ube luthando oluhlawulelwayo.
Kuhlala kuyimfuneko ukuthandaza ngomthandazo San Marcos de León yothando.
Uthando sesinye sezizathu ezenza ukuba uluntu luphela lube nokunxibelelana rhoqo nezulu.
Ewe ungaphindiswa yintoni ubunzima obuthile buyadlula nesi sibini imithandazo yothando ISan Marcos de León inamandla.
Kolu luhlobo lwezicelo umntu kufuneka athethe ngokunyaniseka. Khumbula ukuba sithetha nomntu osokola apha emhlabeni bonke obu bunzima kwaye yiyo loo nto esiya kusiqonda kakuhle.
Xa usenza umthandazo ngokuthandabuza amandla amabi akhutshiweyo akwenzi ukuba umthandazo ungakhuphuki, yiyo loo nto kufuneka ubuzwe ngokholo, uqinisekile ukuba umdali wazo zonke izinto uya kuvuma ukusinceda, engalambanga ixesha esilityala sithandaza.
Ukuthandaza ngaphandle kokholo kufana nokungenzi nto kwaye xa ulangazelela isicelo esihambelana nothando, ukholo luyimfihlo eyonceda yonke into isonjululwe ngokukhawuleza.
Umthandazo kaMark oNgcwele kaLeon ngomsebenzi
Ndilapha, O San Marcos de León, ukuba ndikukhonze ngokuthobeka!
Ukusondela kule nto ubuyithetha; Ukudumisa ngobubele bakho obungenasiphelo.
Njengomntu ozinikeleyo othembekileyo, bendihlala ndikhonza ngokufanelekileyo uyilo lukaThixo, kwaye umoya wam womelezwa zizibhalo ezingcwele.
Yiyo loo nto, mvangeli othandekayo, ndiyakucela namhlanje ukuba undinike olo ncedo sele usazi ...
(Thetha ububele ngokunxulumene nomsebenzi)
Uyazi ukuba kunye naye ndifuna kuphela okulungileyo okwam kunye nokwam kwaye ndinqwenela ukusondela eNkosini. Ndiyazi ukuba ndiza kuviwa kuba ...
Buza iSan Marcos de León kwinto enento yokwenza nobomi bethu bokusebenza Yinjongo yokubaluleka kokwenyani.
Indawo yethu yokusebenza yindawo yethu yekhaya yesibini kuba zininzi iiyure esizichitha apho, yiyo loo nto amaxesha ngamaxesha kukho iimeko apho singenakwenza nto ngaphandle kokuphakamisa umthandazo kunye nokholo lokuba zizisombululo.
Lo mthandazo ungakhokelela emsebenzini apho besilinde khona ixesha elithile okanye usombulule nasiphi na isiphazamiso esithintela umsebenzi wethu ukuba ungahambi kakuhle, nasiphi na isicelo somsebenzi onokuthi ucelwe kwiSan Marcos kwaye uya kukunceda.
Umthandazo uze | uthando
Emagameni kaThixo ndiyanibongoza, moya wolawulo-moya weSt. Ngonyama.
Ndenza lento kuwe Umthandazo wokukhetha uphawu lwengonyama ezayo Ndiyakukhuthaza ukuba undincede ndizive kakuhle ezi ntlanu.
Ingcinga, ityala, kunye nentando (igama lomntu) Andikwazi kutya okanye ukulala, andikwazi ukusela okanye ukuhamba.
Ngamana iingcinga zakhe zingabekwa kum kuphela ade abe phantsi kweenyawo zam aze kuma kwindawo enomgangatho ofanelekileyo ukuba andenze ndiguquke kwaye Undithobile Undiphatha ngembeko esifaneleyo sonke.
Ngo-2 ndikubona, nge-3 ndikubophe, ndisela igazi nentliziyo iparto amehlo am awamfamekisi kwaye intando yam yeyakho Makube njalo, makube njalo.
Sifuna ukugqiba inqaku lethu ngomthandazo kuSan Marcos de León ukuba yiza uthando.
Ngumthandazo owomeleleyo kwaye owaziwayo.